Kudonhedza NOKUZADZISA PANDA: NZIRA-NENHATSO GWEDZISO
"Chii chinotevera?" unogona kunge uri kushamisika. Zvino zvawaita sarudzo yekudzidza zvakawanda nezveKudonhedza nesu, ngatitangei.
CHITATU 1: GADZIRA SHOP KUWANIKWA
● Iwe unotipa mvumo yekutarisa mumirairo yako. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutitumira yako email kero uye titendere isu kuwana kune yako online bhizinesi. Tichabatanidza app yedu kuchitoro chako, uye tichaishandisa chete kugadzira zvinyorwa zvekutakura.
STEPI 2: CHIDZIDZO CHEMAFUNGWA NESANGANO
● Kana chitoro changosanganiswa, isu tichaongorora-mbiri zvigadzirwa nemitengo yezvinhu.
CHITATU 3: SOURCING KUNYANYA
● Ukangosimbisa zvigadzirwa nemabhidi, tinobata yako yekutenga. FulfillPanda inogara ichiwana nzira yekuunza mutengo uye mhando pamwechete. Vashandi vedu vanobudirira mukutsvaga zvinhu zvemhando yepamusoro pamitengo yemakwikwi zvakanyanya. Tinogona kutenga zvakananga kubva kune vanogadzira, tichideredza mitengo yedu ne5-10% zvichienzaniswa neAliExpress! Nekuda kwekubata kwedu kwezuva nezuva vhoriyamu, isu tinokwanisa kuwana mutengo wakanakisa wevhoriyamu yedu yekutenga, tichideredza zvakanyanya mari yako.
● Uyezve, nekuti zvese zvinodonhedzwa zvaendeswa, hapana chikonzero chekuverengerwa paruoko. Isu tichava nemabasa ekuchengeta zvinyorwa zvako, kuzvimisikidza pamwe nekuzvigadzirisa.
CHITATU 4: KUTAURA
● Kana mutengesi aendesa zvinhu zvakatengwa kudura redu, tinoongorora yega yega kuona kuti inosangana nemitemo yechigadzirwa uye inoshanda nemazvo. Nekuti isu tinokoshesa bhizinesi rako sekunge raive redu, tinotora kugutsikana kwevatengi uye tinokoshesa zvakanyanya.
STEPI 5: KUTUMIRA & PASHURE-SALE SERVICES
● Tinogona kutumira zvinhu zvako chero kupi zvako pasi tichishandisa yedu FAST Yakavanzika Line yekutakura kana chero mumwe mutakuri. Tinogona zvakare kunyora logo yekambani yako pamabhokisi nemapasuru, pamwe nekupa makadhi ebhizinesi.
● Unogona kuteedzera yako maodha online uye uteedzere nesu kana uine chero matambudziko nezvekutakura.
CHITATU 6: KURIPA
● Payoneer, Transferwise, Wire Transfer uye zvimwe zvekubhadhara zviripo.
STEPI 7: GADZIRA UPDATE
● Iwe unenge uine Pfupiso uye Accounting Dashibhodhi kwaunogona kuteedzera zvese; haufanire kushandura kana kushandura chero chinhu mune iri pepa - ingo tevera. Ruzivo rwese maererano nemirairo, accounting uye kuyerera kwemari zvinowedzeredzwa zvakaringana & otomatiki mune yakagovaniswa yeGoogle peji. Kana iwe uine chero mibvunzo, isu tinochengeta yedu Skype Line yakavhurika.